PS4 मा इन्टरनेट जडान कसरी सुधार गर्ने | मोबाइल फोरम
PS4 मा इन्टर्नेट जडान कसरी सुधार गर्ने
डेनियल टेरासा | 26/11/2021 09:00 | इन्टरनेट
PS4 खेलाडीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो डर मध्ये एक खेलको बीचमा असामयिक ढिलाइको अनुभव गर्नु हो। खेलको एक बिन्दुमा हामी घातक गोली लाग्न लागेका छौं र, के भयो वा थाहा नपाएर, हाम्रो चरित्र जमिनमा मरेको छ। जडान एकदमै ढिलो भएकोले उनीसँग प्रतिक्रिया वा आफूलाई बचाउने मौका थिएन। र त्यसपछि, तार्किक क्रोध पछि, हामी आश्चर्यचकित हुन्छौं PS4 जडान कसरी सुधार गर्ने.
यदि तपाइँको लागि यो मामला हो (यदि तपाइँको PS4 धेरै ढिलो चलिरहेको छ) त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन हामीले इन्टरनेट गति सुधार गर्न र बच्न गर्न सक्छौं। खेलको बिचमा ती चिन्ताजनक ढिलो वा "फ्रिज"।
ढिलो कार्यसम्पादन र विलम्बता वा विलम्बताको सबैभन्दा सामान्य कारणहरूको विश्लेषण गर्दा एउटा समस्या हो, चार मुख्य अवस्थाहरूलाई छुट्याउन सकिन्छ:
WiFi प्रयोग गर्दा PS4 ढिलो हुन्छ।
ल्याग स्पाइकले खेल खेल्ने बाधा भयो।
PS मा ढिलो अपलोड वा डाउनलोड गति।
रिमोट प्लेमा PS4 लेग।
जुनसुकै समस्या भए पनि, हामी PS4 जडान सुधार गर्न र तरलता र चपलताको साथ खेलको साथ हाम्रो खेल दिनहरूको मजा लिन उपलब्ध विभिन्न समाधानहरूको समीक्षा गर्न जाँदैछौं।
1 WiFi प्रयोग गर्नुको सट्टा तार जडानमा स्विच गर्नुहोस्
2 धेरै डाउनलोडहरूसँग PS4 संतृप्तिबाट बच्नुहोस्
2.1 व्यक्तिगत डाउनलोडहरू
2.2 प्ले नगर्दा डाउनलोड गर्नुहोस्
2.3 निद्रा मोडमा डाउनलोड गर्नुहोस्
3 DNS बदल्नुहोस्
4 PS4 फर्मवेयर अपडेट गर्नुहोस्
5 आफ्नो कम्प्युटर नवीकरण गर्नुहोस् (र इन्टरनेट जडान)
WiFi प्रयोग गर्नुको सट्टा तार जडानमा स्विच गर्नुहोस्
इथरनेट केबल प्रयोग गरेर PS4 मा इन्टरनेट जडान सुधार गर्नुहोस्
यदि हाम्रो PS4 WiFi जडान एकदमै ढिलो छ भने, सायद तपाईंले गर्नुपर्छ तार जडानमा स्विच गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्। एक क्लासिक, तर प्रभावकारी समाधान।
जब PS4 मार्फत इन्टरनेटमा जडान हुन्छ वाइफाइ, यो एकदम सामान्य छ कि तपाइँ ढिलो गति अनुभव गर्नुहुन्छ। यो किनभने कन्सोल र राउटर बीच धेरै दूरी छ। वा तिनीहरूको बीचमा केही अवरोधहरू छन् (पार्टिशन, फर्निचर, आदि) जसले जडानलाई कमजोर पार्छ।
अर्कोतर्फ, तार जडान प्रयोग गरेर, यी सबै समस्याहरू अवस्थित छैनन्। PS4 तपाईंको इन्टरनेट मोडेममा सिधै जडान हुन्छ इथरनेट केबल मार्फत, जडान संग यो छिटो र अधिक विश्वसनीय हुनेछ। यो हामीले तार जडान स्थापना गर्न के गर्नुपर्छ:
पहिलो, हामी मोडेमको ल्यान पोर्टहरू मध्ये एउटामा इथरनेट केबल जडान गर्छौं।
पछि हामी इथरनेट केबलको अर्को छेउलाई PS4 को LAN पोर्टमा जडान गर्छौं, जुन कन्सोलको पछाडि अवस्थित छ।
यो गरिसकेपछि तपाईले जानु पर्छ "मुख्य सूची" प्लेस्टेशन4मा र विकल्प चयन गर्नुहोस् "सेटिंग"।
त्यहाँ हामी पहिले छान्छौं "नेट" र निम्न मेनुमा को विकल्प "इन्टरनेट जडान सेट अप गर्नुहोस्"।
अर्को चरण छनोट गर्नु हो "LAN केबल प्रयोग गर्नुहोस्" र अन्तमा विकल्प चयन गर्नुहोस् "सजिलो"।
एकचोटि हामीले यी चरणहरू पूरा गरेपछि, हाम्रो PS4 ले बाँकी काम गर्नेछ: यसले इथरनेट केबल पत्ता लगाउनेछ र कन्सोललाई इन्टरनेटमा जडान गर्नेछ। यसले हाम्रो PS4 को इन्टरनेट जडानलाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्नुपर्छ। हामीले खेल्न सुरु गर्ने बित्तिकै हामी यसलाई तुरुन्तै याद गर्नेछौं।
धेरै डाउनलोडहरूसँग PS4 संतृप्तिबाट बच्नुहोस्
धेरै धेरै एकसाथ रिफहरूले तपाईंको PS4 को गति कम गर्न सक्छ
यो शुद्ध तर्क हो। यदि हामी तपाइँको प्लेस्टेशन4मा एकै समयमा धेरै खेलहरू डाउनलोड गर्न कोशिस गर्दैछौं भने, जडान पीडा हुने छ। यो सामान्य भन्दा ढिलो हुनेछ। यो हुन्छ किनभने हामी एक प्रामाणिक कारण हो ट्राफिक जाम, एक बाधा। त्यो के हुन्छ भन्ने एक सुन्दर वर्णनात्मक तस्वीर हो।
ताकि यो हाम्रो साथ नहोस्, यो धेरै राम्रो छ एक एक गरेर खेलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्। कुनै पनि अवस्थामा, इन्टरनेट गति पनि सुस्त हुनेछ यदि हामीले खेल्ने प्रयास गर्दा अर्को खेल एकै समयमा डाउनलोड भइरहेको छ। यदि कन्सोलले एकै समयमा धेरै खेलहरू डाउनलोड गरिरहेको छ भने, हामी "उनीहरूलाई लाइन अप" गर्न सक्छौं र कुन कुन डाउनलोड गर्न चाहन्छौं भनेर निर्णय गर्न सक्छौं। यो यसरी गरिन्छ:
पहिले हामी यसमा क्लिक गर्दछौं "सुरु बटन" कन्ट्रोलर को।
अर्को हामी आइकनमा जान्छौं "सूचनाहरू" मुख्य मेनु मा। डाउनलोड भइरहेका खेलहरू सूचना सूचीको शीर्षमा देखा पर्नेछ।
हामी यसमा कर्सर राखेर र PS4 नियन्त्रकमा "X" थिचेर पज गर्न चाहने सामग्री चयन गर्छौं।
अन्तमा, एउटा मेनु देखा पर्नेछ, जसमा तपाईले मात्र चयन गर्नु पर्छ "रोक्नुहोस्"।
प्ले नगर्दा डाउनलोड गर्नुहोस्
ढिलाइको कारणले हुने निराशाको सामना गर्ने अर्को सजिलो तरिका हो हामी खेलिरहेको बेला खेलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, यदि हामी दिनको अन्त्यमा नयाँ खेलको आनन्द लिन चाहन्छौं, लामो दिनको काम पछि आराम गर्न, हामीले के गर्नुपर्छ घर छोड्नु अघि, दिनको पहिलो चीज डाउनलोड गर्नको लागि।
निद्रा मोडमा डाउनलोड गर्नुहोस्
अर्को धेरै व्यावहारिक चाल हो सामग्री डाउनलोड गर्दा प्लेस्टेशन4लाई स्लीप मोडमा राख्नुहोस्। यसले हामीलाई गति बढाउन पनि मद्दत गर्छ। यो गर्नको लागि, तपाईंले यी चरणहरू पालना गर्नुपर्छ:
हामी मुख्य मेनुमा जान्छौं र चयन गर्छौं "सेटिंग"।
त्यसपछि हामी चयन "ऊर्जा बचत सेटिङहरू"।
चयन गर्न अर्को विकल्पहरू छन् "सेट निद्रा मोड मा उपलब्ध कार्यहरु" अनि तेस्पछि "इन्टरनेटमा जडान रहनुहोस्।"
यो गरिसकेपछि, हामी गृह स्क्रिनमा फर्कन्छौं जहाँ हामीले चयन गर्छौं "सूचनाहरू" सामग्री डाउनलोड भइरहेको छ कि भनेर हेर्न। यदि त्यसो हो भने, यो डाउनलोड पट्टीको साथ सूचीको शीर्षमा देखा पर्नेछ।
अर्को तपाईंले थिच्नु पर्छ र समात्नु पर्छ "सुरु बटन" PS4 नियन्त्रक मा।
अन्तमा, हामी चयन गर्छौं "आराम मोड"।
PS4 मा इन्टरनेट जडान सुधार गर्न DNS पुन: कन्फिगर गर्नुहोस्
El डोमेन नाम प्रणाली (DNS) तिनीहरूको सम्बन्धित IP (इन्टरनेट प्रोटोकल) ठेगानाहरूसँग वेबसाइटहरूको सूची भण्डार गर्दछ। DNS ले मोबाइल फोनको लागि ठेगाना पुस्तिका जस्तै काम गर्दछ, सबै आईपी ठेगाना नम्बरहरूको ट्र्याक राख्छ त्यसैले हामीले गर्नुपर्दैन।
सामान्यतया, यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो जसले हामीलाई हाम्रो गृह नेटवर्कमा पूर्वनिर्धारित DNS सर्भर प्रदान गर्दछ। जे होस्, यो सर्भर अरूहरू जस्तै छिटो ठेगानाहरू लोड गर्न अनुकूलित छैन। उदाहरणका लागि, Google DNS मा स्विच गर्नुहोस् यसले हामीलाई हाम्रो PS4 को WiFi को गति सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। हामी तपाइँको DNS सर्भर कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर व्याख्या गर्छौं:
सुरु गर्न हामी मुख्य मेनुमा जान्छौं र चयन गर्छौं "सेटिंग"।
अर्को हामी नेटवर्क चयन गर्नुहोस् र को विकल्प थिच्नुहोस् "इन्टरनेट जडान सेट अप गर्नुहोस्"।
त्यहाँ हामीले हाल प्रयोग गरिरहेको जडान छनोट गर्छौं, विकल्प चयन गर्छौं "निजीकृत" र यो भित्र, बाटो "ह्यान्डबुक"।
तल देखा पर्ने स्क्रिनमा, तपाईंले व्याख्या गरे अनुसार सेटिङहरू समायोजन गर्नुपर्छ:
IP ठेगाना कन्फिगरेसन - स्वचालित
DHCP होस्टनाम - निर्दिष्ट नगर्नुहोस्
DNS कन्फिगरेसन - म्यानुअल
प्राथमिक DNS - 8.8.8.8
माध्यमिक DNS - 8.8.4.4
MTU सेटिङहरू - स्वचालित
प्रोक्सी सर्भर - प्रयोग नगर्नुहोस्
एकचोटि यी सेटिङहरू बनिसकेपछि, प्लेस्टेशन बन्द गर्न र यसलाई फेरि सक्रिय गर्न बाँकी छ। त्यसपछि, जब तपाइँ खेल डाउनलोडहरू पुन: सुरु गर्नुहुन्छ, यो दृश्यात्मक रूपमा छिटो तरिकामा चल्नेछ।
PS4 फर्मवेयर अपडेट गर्नुहोस्
फर्मवेयर अपडेट गरेर PS4 जडान सुधार गर्नुहोस्
जब माथि वर्णन गरिएका विधिहरू असफल हुन्छन्, हामीले सोच्न थाल्नुपर्छ कि हाम्रो प्लेस्टेशन4धेरै ढिलो काम गर्दछ किनभने फर्मवेयरको म्याद सकिएको छ। फर्मवेयर सफ्टवेयरको एक टुक्रा हो जसले हार्डवेयरको उचित कार्यमा योगदान गर्दछ। त्यसैले, यसको सही अपडेटले छिटो डाउनलोड गति सुनिश्चित गर्नेछ साथै PS4 को राम्रो सामान्य कार्य। यो गर्न को लागी चरणहरु धेरै सरल छन्:
हामी PS4 को स्टार्ट मेनुमा जान्छौं र चयन गर्छौं "सेटिंग".
त्यसो भए हामी गर्नेछौं "प्रणाली सफ्टवेयर अपडेट"। यदि अद्यावधिक उपलब्ध छ भने, यो स्वचालित रूपमा सुरु हुनेछ।
आफ्नो कम्प्युटर नवीकरण गर्नुहोस् (र इन्टरनेट जडान)
QoS राउटरहरूलाई गेमिङ राउटरहरू पनि भनिन्छ।
त्यहाँ अझै धेरै चीजहरू छन् जुन हामीले गर्न सक्छौं, भले पनि यसको मतलब तपाईको खल्ती अलिकति स्क्र्याच गर्नु पर्छ। उदाहरणका लागि, PS4 जडान सुधार गर्न सम्भव छ राउटर अप्टिमाइज गर्दै। त्यहाँ केही विशेष रूपमा खेलहरू सुधार गर्न डिजाइन गरिएका छन् जसमा सेवाको गुणस्तर (QoS) सुविधाहरू समावेश छन्, जसलाई "खेल राउटरहरू" पनि भनिन्छ।
यो पनि महत्त्वपूर्ण छ5GHz ब्यान्ड भएका राउटरहरू रोज्नुहोस्। यसले हामीलाई 2.4 GHz भन्दा छिटो र अधिक भरपर्दो वाइफाइ गतिको आनन्द लिन अनुमति दिन्छ। राउटरहरूले गतिको निश्चित मात्रा मात्र ह्यान्डल गर्न सक्छन् भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्। उदाहरणका लागि, यदि हामीसँग 300Mbps सम्मको डाउनलोड गति प्रदान गर्ने इन्टरनेट योजना छ, तर तपाईंको राउटरले 100Mbps सम्मको गतिलाई मात्र समर्थन गर्दछ, हामी त्यो रकमलाई कहिल्यै नाघ्ने छैनौं। त्यो हो, हामीले डाउनलोड गतिको 200 Mbps गुमाउनेछौं। त्यो चाहिने तरलता बिना चलिरहेको हाम्रो PS4 खेलहरूको उत्पत्ति हुन सक्छ।
अन्तमा, त्यहाँ अर्को मुद्दा छ जुन हामीले विचार गर्नुपर्छ: छिटो इन्टरनेट जडान भाडामा लिनुहोस्। विशेष गरी यदि घरमा धेरै मानिसहरू छन् जो एकै समयमा खेल्छन्, इन्टरनेट सर्फ गर्छन् वा सामग्री डाउनलोड गर्छन्।
हाम्रो PS4 मा पुग्ने वास्तविक इन्टरनेट गति के हो भनेर प्रमाणित गर्ने एउटा तरिका छ। यी सरल चरणहरू छन्:
हामी जाँदै छौं "सेटिंग"।
त्यहाँबाट विकल्पमा "नेट"।
यस स्क्रिन भित्र हामी विकल्प फेला पार्नेछौं "नेटवर्क जडान परीक्षण गर्नुहोस्।"
सत्य यो हो कि त्यहाँ निश्चित प्रकारका इन्टरनेट जडानहरू छन् जुन गेमिङका लागि स्पष्ट रूपमा राम्रो छन्। यो सादा र सरल छ किनभने तिनीहरूले राम्रो अपलोड गति प्रस्ताव गर्दछ: एक प्रसिद्ध उदाहरण: जब यो गेमिङ को लागी आउँछ, फाइबर केबल भन्दा राम्रो छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » PS4 मा इन्टर्नेट जडान कसरी सुधार गर्ने
फोर्टनाइटको नाम वा निक कसरी परिवर्तन गर्ने
ब्ल्याक फ्राइडे Xiaomi: यी अविश्वसनीय प्रस्तावहरूको फाइदा लिनुहोस्